Accueil > Gazetin'ny nosy > Virapin : 5 taona in-droa no voalazan’ny Lalàm-panorenana
Virapin : 5 taona in-droa no voalazan’ny Lalàm-panorenana
Amin’izao fotoana izay ho fanarenana ny firenena izao dia namoaka ny fomba fijeriny ingahy Virapin Ramomnjisoa mahakasika ny lalàm-panorenana izay nifanarahana fa ho tanterahana amin’izany.
Koa satria hoy ity mpanao politika sy mpiasam-panjakana ambony ity fa fanarenam-pirenena no tenenina dia aoka harahina sy ho tanterahana izany. Tsy ny mpitondra fanjakana ihany no tokony hanaraka sy hanatanteraka azy io fa ny olom-pirenena rehetra rehetra mahatsiaro tena fa Malagasy na ny mpanohitra na ireo oloa tsotra koa.
Niompana amin’ny fanazavana ny fahazoan’ny filohampirenena mitondra fanjakana sy mitantana ny firenena no fanazavany tamin’izany ka ilay mandà 5 taona miverina in-droa no tokony hofatarina no antony nisafidianana izany. Tsy amin’ny fijery politika ihany nany ady fahefana no jerena amin’izany fa ny mahakasika ny fitantanana sy ny fanarenam-pirenena izay mitarika ny fahantrana eto hatramin’izao.
Hoan’ingahy Virapin Ramonjisoa izay filohan’ny antoko politika “groupe Virapin” dia notsindriny fa matoa natao 5 indroa no mahazo milatsaka hofidina sy hitondran’ny filoham-pirenena izay mitondra eo, dia mazava hoazy fa ao anatin’izay fotoana izay no tsy maintsy hanantanterahany ny veliranony amin’ny vahoaka.
Nohazavainy tamin’izany raha io voalazan’ny lalàm-panorenana dia ao anatin’ny 5 taona izay tsy maintsy hanatanterahana ny atao hoe vonjy tavanandro ny firenena amin’izany. Izany dia tsy maintsy lalàna izorana mba hanatanterahana ny vinam-piarahamonina izay nentin’ny fitondrana izay mitondra . Koa satria ingahy Andry Nirina Rajoelina hoy izy no mitondra dia tsy maintsy jerena tsara hoe aiza ho aiza amin’izao fotoana izao ilay tetikasa vonjy tavanandro izay tsy maintsy hirosoany mba hahazoany hanantateraka antsakany sy an-davany ny velirano sy ny IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar) izay tsy maintsy ho tanterahany. 300 andro izao no eo amin’ny fitondrana izy ary inona no vitany tamin’izany? Dia ireo iarahana mahita ireo fa tsy maintsy atao aloha ny ady amin’ny kolikoly izay vato misakana amin’ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mbola tsy nisy mpanao politika sy mpiasam-panjakana ambony teto Madagasikara ka notsaraina sy nogadraina noho izany raha tsy tamin’izao fotoana izao. Ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana izay hanaovan’ny fanjakana fandaharan’asa lehibe ka nampihena ny asan-jiolahy sy asan-dahalo. Ny fanenjehana ireo mpanodinkodina volam-panjakana sy ny harem-pirenena. Tamin’ny resaka fampianarana dia izao vao nisy mpiandraikitra fanadinana nigadra noho ny kolikoly tamin’ny Bakalôrea teto Madagasikara hatramin’izao. Natao ankarihary koa ny mpampianatra Fram izay noraisina ho mpiasam-panjakana ary tsy nanaovana fijerena antoko politika ny fanendrena ireo lehiben’ny fampianarana any amin’ny faritra fa izay hita fa hahavita azy sy hahay hiara-miasa amin’ny fanatanterahana ny tarigetram-panjakana no napetraka amin’izany. Zava-dehibe hoy ingahy Virapin Ramamonjisoa ny mahakasika ny tale iray izay noforonina ka napetraka ao Ambohitsorohitra ka handray ny fitarainana rehetra izay mianjady amin’ny olona rehetra tsy ankanavaka ka tiana ho tonga any amin’ny tompon’andraikitra aram-panjakana ary indrindra ny filohan’ny repoblika. Ny raharaham-pitsarana dia nojerena akaiky koa ary nametrahana ny fitsarana haingana mba hialana amin’ny fanagadrana mandeha ho azy izay nahazatra hatramin’izay.
Isan’ny zava-dehibe ny makasika ny fanoloana ireo ambasadaoro sy diplaomaty niasa tany ivelany ka nafindra toerana na nosoloina tao anatin’ny taona maro izay. Izany no isan’ny fototry ny namparisarisa ny fiaraha-miasa amin’ny vondrona iraisam-pirenena.
Tsy maintsy itadiavana vahaolana ny mahakasika ny Jirama izay potika nandritry ny taona maro. Làlana tsy maintsy diavina aloha izao na iza na iza filoha hitondra eo hoy ingahy Virapin.
Koa satria efa maika loatra ny Malagasy amin’ny fampandrosoa sy fanarenam-pirenena ka misy ny tsy mahandry intsony ny dingana tsy maintsy lalovana hahatongavana amin’izany. Tsy maintsy fafana ny tokontany ary tsy maintsy diovina ny tanàna alohan’ny zavatra rehetra.
Ny mpanao politika mpanohitra koa tsy mijery raha tsy amin’ny fomba mitongilana ka manadino tanteraka ny voalaza ao anaty lalàm-panorenana ka odiana tsy hita ny fanatanterahana ny vinam-pandrosoana izay voalaza fa 5 taona indroa miatoana no omena ny filoha izay mitondra eo ka ny dimy taona voalohany no itsarana azy aloha.